Saadaq Joon oo loo doortay kursi baarlamaan [Xasaanad raadin] | KEYDMEDIA ENGLISH
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Taliyahii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon), ayaa kusoo baxay kursiga tirsigiisu tahay HOP248, doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor, ayaa Saadaq kala shaqeeyay sidii uu ku heli lahaa, kursi baarlamaan, maadaama uu ka mid yahay shaqsiyaadka sida gaarka ah loogu heysto gobood-fallo, intii uu la shaqeynayay Farmaajo.
Kursiga Golaha shacabka ee loo doortay, waxaa baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Maxamed Axmed Abtidoon, kaas oo Qoorqoor, ka hor istaagay u baratanka kursiga, kadib markii uu is beddel ku sameeyay kusigaan iyo midka Aqalka sare ee beesha Cadaado.
Dhamaadkii 2020, QM ayaa sheegtay (Saadaq Joon), lagu waayay caddeyn tuhun la xiriira inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab, kadib markii Kooxda la socodka cunaqabateynta Soomaaliya iyo Ereteriya, ay ku eedeeyeen inuu xiriir la leeyahay Al-qaacida.
12 April 2021, Saadaq ayaa laga xuyuubiyay jagadii uu hayay ee taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Benaadir, kaddib markii uu is hor istaagay fadhigii Golaha Shacabka BJFS oo doonayay in ay muddo kordhin sharci-darro ah u sameeeyaan Farmaajo.
13 April 2021, War lagu faafiyay warbaahinta Dowladda, ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu Xeer Madaxweyne xilkii iyo darajadii kaga qaaday S/G, Saadaq, kadib markii uu diiday inuu qeyb ka noqdo saraakiil Farmaajo garab ku siineysay muddo kordhintii fashilantay.
Bartamihii July 2021, Saadaq, ayaa qabsaday baraha bulshada, kadib markii la ogaaday inuu ka mid yahay hoggaanka ciidamadii huwanta ahaa ee howlgalka xooggan maalmahaas ka waday degaannada dhaca koofurta iyo bariga Gobolka Mudug.
2 August 2021, ciidan uu sarkaalkaan hor kacayo ayaa la wareegay degaanka Camaara ee gobolka Mudug oo in muddo ah ay ka talinayeen Kooxda Al-Shabaab, wuxuuna cagta mariyay fariiso xooggan oo Al-Qaacidada geeska afrika ku lahaayeen Mudug.
Shaqadaas, uu ka qabtay GM, waxa ay sababtay isku soo dhawaanshaha isaga iyo Qoorqoor, taas oo ugu danbeyn hirgalisay inuu billowgii bishaan caasimadda kulamo is-cafin ah kula qaato, Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, Is-araggaas waxaa fududeeyay Qoorqoor.
Saadaq Cumar, wuxuu ka mid ahaa, saraakiil muddo dheer la soo shaqeyneysay F&F, wuxuuna ku lug lahaa xasuuqii 17 December 2017, ka dhacay xarunta Xisbiga Wadajir, halkaas oo lagu laayay ilaaladii hoggaamiyaha Xisbiga, Cabdiraxmaan Cabdishakuur.